धर्मेन्द्रको स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि सन्नी देओलका छोराले गरे अचानक इन्गेजमेन्ट « Nipolnews
धर्मेन्द्रको स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि सन्नी देओलका छोराले गरे अचानक इन्गेजमेन्ट
यतिबेला बलिउडमा विवाहको सिजन चलिरहेको छ । भर्खरै बलिउडको क्यूट जोडी रणवीर र आलियाको विवाह भएको थियो, जसको चर्चा टाढा–टाढा भएको थियो ।
अब यो एपिसोडमा अर्को नाम थपिने भएको छ । अभिनेता धर्मेन्द्रका नाति र सन्नी देओलका छोरा करण देओलले पनि प्रेमिका द्रिशासँग इन्गेजमेन्ट गरेका छन् । दुवैले छिट्टै विवाह गर्ने खबर छ । विवाहको तयारी तिब्र रुपमा भइरहेको छ ।
समाचारका अनुसार यो जोडीले छिट्टै आफ्नो विवाहको मिति घोषणा गर्नेछन् । अभिनेताको तर्फबाट अहिले कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । यसको पछाडि धर्मेन्द्र देओलको स्वास्थ्य अचानक बिग्रनु रहेको बताइएको छ । हालै धर्मेन्द्रलाई मांसपेशीको समस्याका कारण अस्पताल भर्ना गरिएको थियो ।
द्रिशा दिवंगत फिल्म निर्माता विमल रोयकी नातिनी हुन्। करण र द्रिशा लामो समयदेखि एकअर्कालाई डेट गरिरहेका थिए । उनीहरु धेरै पटक सँगै देखिएका थिए । यद्यपी दुबैले मिडियासामु आफ्नो सम्बन्धको बारेमा कहिले पनि खुलेर बोलेनन् ।
अहिले उनीहरुको विवाहको खबर सामाजिक सञ्जालमा निकै छ । तर, दुवैको इन्गेजमेन्टसँग सम्बन्धित कुनै तस्बिर भने सार्वजनिक भएको छैन । यदि तपाईंलाई याद छ भने, करण २०१९ मा फिल्म पल पल दिल के पासु मा देखा परेका थिए।
चलचित्रले दर्शक र समीक्षकबाट मिश्रित प्रतिक्रिया पाएको थियो । करण छिट्टै फिल्म ‘अपने २’ मा देखिनेछन् । यस फिल्ममा उनका बुवा र हजुरबुवा धर्मेन्द्र पनि सँगै देखिनेछन् ।
के जेलबाट छुट्न लागेका हुन् पल शाह ? आज हुने भनिएको पलको सुनुवाई अन्तिम समयमा आएर रोकिनुको खास कारण यस्तो रहेछ
पोखरा । नायक पल शाहको मुद्दाको अनुसन्धान कहाँ पुग्यो भन्ने चासो आम जनता र उनका
अन्तत कान्स फिल्म फेस्टिवलको रेड कार्पेटमा वाक गर्ने पहिलो नेपाली कलाकार बनिन् नायिका सुरक्षा पन्त
काठमाडौं, ५ वैशाख : अभिनेत्री सुरक्षा पन्त कान्स फिल्म फेस्टिवलमा सहभागी भएकी छिन् । पन्तले
अचानक नायिका प्रियंकालाई के भयो ? अनुहारको यस्तो हालत देखेपछी फ्यानहरु चिन्तामा
एजेन्सी । बलिउड एवं हलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडाले सामाजिक सञ्जालमा अनुहारमा चो ट लागेको तस्वीर